साग पोखराः ट्रायथलनमा सोनीले नेपाललाई दिलाईन् स्वर्ण (तस्विरहरु) - Gandak News
साग पोखराः ट्रायथलनमा सोनीले नेपाललाई दिलाईन् स्वर्ण (तस्विरहरु)
गण्डक न्यूज द्वारा १६ मंसिर २०७६, सोमबार १४:०९ मा प्रकाशित
पोखरा । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पोखरामा सोमबारदेखि ट्रायथलन सुरु भएको छ । पहिलो दिन पुरुष र महिला तर्फ स्प्रिन्ट विधामा दुई स्वर्णका लागि खेल भयो । नेपाल र भारतले स्वर्ण जितेका छन् । सोमबारको खेलमा भारतले दुई रजत र एक कास्य तथा नेपालले थप एक कास्य पदक प्राप्त ग¥यो ।
महिला स्प्रिन्ट विधामा नेपालकी सोनी गुरुङले स्वर्ण पदक जितेकी हुन् । महिला ट्रायथोलनको पौडीमा तेस्रो भएकी सोनीले साइक्लिङमा दोस्रो भएकी थिइन् । यस्तै दौडमा सोनी पहिलो भएकी थिइन् । सोनीले निर्धारित दुरी १ घण्टा १३ मिनेट ४५ सेकेण्डमा पार गरेकी थिईन् । महिलातर्फ रजत र कास्य पदक दुवै भारतले हात पारेको छ । निर्धारित दुरी १ घण्टा १४ मिनेटमा पार गर्दैसारोजिनी देवी थाउदमले रजत र १ घण्टा १४ मिनेट ५७ सेकेण्डमा दुरी पार गर्दै प्रगन्या मोहनले कास्य जित्न सफल भएकी हुन् ।
पुरुष तर्फ भारतका आदर्श एम. एन. सिनामोलले स्वर्ण पदक जितेका छन् । आदर्शले १ घण्टा २ मिनेट ३१ सेकेण्डमा दुरी पार गरेका हुन् । पुरुष तर्फकै निर्धारित दुरी १ घण्टा २ मिनेट ५९ सेकेण्डमा पार गर्दै विश्वरजित साईखोमले भारतलाई रजत पदक हासिल गर्न सफल भए । नेपालका लागि बसन्त थारुले १ घण्टा ३ मिनेट ६ सेकेण्डमा दुरी पार गर्दै कास्य प्राप्त गरेका छन् ।
३ दिनसम्म चल्ने ट्रायथलन पुरुष र महिला दुवै विधामा हुने प्रतियोगितामा अन्र्तगत नेपाल, भारत र श्रीलंका गरी तीन देशका २६ खेलाडीको सहभागिता रहेको छ ।
मंगलबार पुरुष र महिलातर्फको स्प्रिन्ट विधाको दुआथलन र बुधबार मिक्स रिले ट्रायथलन हुने भएको छ । दुआथलनका लागि ५ किलोमिटर दौड, २० किलोमिटर साईक्लिङ र २.५ किलोमिटर दौडको दुरी तय गरिएको छ । त्यसैगरी, मिक्स रिले ट्रायथलनका लागि ३ सय मिटर पौडी, ६ किलोमिटर साइक्लिङ र २.५ किलोमिटर दौडको दुरी तय गरिएको छ ।